Kubonakala ukuba uhambe nje kunye neentombi zakho ezisebusuku bakho obuthandayo, udlala ngothando kunye nabafana owakuthandayo, wafika ekhaya ekunteni kwasemini waza waxhoma ngokukhathala kwimilenze ukuba abuyele eyunivesithi ezimbini iiyure. Inzululwazi kunye nolutsha olushushu luhamba ngokukhawuleza kakhulu - kwaye wena, ejwayele amaqela kunye namaqela, namhlanje usuhamba "udibanisa", ugxotha umzondo wakho ojikelezayo kwaye ukhumbule umhla osibonile ukubetha ezimbini kwiimvavanyo. Kubonakala ukuba konke okuqhelekileyo kunye nemvelo, ubeletha intombi yakho ethandekayo okanye unyana, uyintwazana enentsapho evuyayo engaziyo inkxalabo, okanye inkxalabo. Kodwa kuthatha ixesha elincinci kwaye ubhekane neyona nto ibaluleke kakhulu "ingxaki" kumntwana omncinci ongeke ubaleke, unyanisekile kwindlu leyo ngumfazi wendlu, uhlala ephazamisekile kwaye ediniwe, ingakumbi ukuba umntwana wakho unganqabile kwaye uhlala unqabile. Oku kunene ingxaki, kodwa unokufumana indlela yokuphuma kuyo.
Mhlawumbi uye wade uhlawulelwa ngeendlebe zabo bonke abahlobo bakho abafana nabantwana abancinci - awukwazi ukuphuma naphi na, bathi, ukusuka kule nkqubo yesikolo, ukusuka kwiidrafers kunye ne-diapers, kwaye kwindlu ofuna ukuhlambuluka rhoqo akufanele ulibale ngomyeni wakho. Ngelo thuba elifutshane xa umntwana ekugqibeleni ewela elele, uyazama ukupheka into ethile, uphume kancane. Kwaye ngokuqhelekileyo ixesha lakhe alihlali.
Ngokuqinisekileyo, kubantwana nzima kunzima - ndicinga ukuba uyazi malunga nale nto kwaye wazama nokuziphatha ngokuzilungisa kuzo zonke ezi bunzima. Abantwana - bayahlala bevuyiswa, kodwa kufuneka ufunde indlela yokuphatha kakuhle ubunzima obuhamba kunye nokubonakala komntwana endlwini. Kufuneka ulungele ukuba ubomi bakho buya kuhamba ngokukhawuleza, buya kuphazamisa ubomi beemvuthu, ezingenakwenza nto yodwa.
Iimeko zentsapho zihlukile, ezinye zazo zenza ukuba unina aphulelwe umntwana kumzuzwana, ngoxa abanye bengavumeli oomama benkululeko enjalo. Njengoko sele uqondayo, ndithetha ngokuba ngubani ohlala nawe. Umzekelo, ukuba lakho lisebenze okanye lisebenze ekhaya - ungatshintsha ngokulula kumagxa akhe ubuncinane umsebenzi wesikolo. Ngaloo ndlela, ukhulula ixesha elithile. Emva kwakho konke, xa kufika ixesha kwaye unako ukubalekela kwindawo ethile kunye nomyeni wakho okanye intombi, kufuneka ukhangele ngokumangalisayo, kwaye ungathandi njengowesifazane ogqwebileyo ongekho iinwele kunye nokuzenzela, ngokukhangela izibilini zakhe kunye neziqholo ezinkulu phantsi kwamehlo akhe.
Ngoko, ukuba uhlala nootatomkhulu, kuya kuba lula kuwe malunga noku. Kakade ke, ngelixa umntwana usencinane kakhulu kwaye uya kubelelwa ngaphandle kweengxaki, ngoko awuyi kukwazi ukushiya umntwana wakho ixesha elide kunye nogogo wakho. Ingqungquthela esemncinci, njengento enye, idinga ukufudumala komama kunye nokunyamekela. Ngoko ke, umonde omncinci - uza kufika ixesha xa, ukubeka i-malyavka ukuba ilale ubusuku, unxibe kakuhle kwaye uphume kunye nabahlobo kwiqela okanye kunye nomyeni wakho ngokuhlwa yothando kwisinye ivenkile. Ewe, apho, nje nje uhamba ngelobusuku ngaphantsi kweepeni kunye nomntu onobubele - yindlela enhle yokuchitha ixesha! Kungcono kunokuba ungahambi naphi kwaye unqabile kwiibhotile zeentaba kunye namacwecwe aneembiza.
Ukuba umyeni wakho wenza umsebenzi obalaseleyo kunye nosana kwaye ufuna ukuchitha ixesha kunye naye - ngoko unokushiya umyeni kunye nomyeni wakho othandekayo, kutheni kungenjalo, ingakumbi ukuba uyamvuyisa kakhulu? Ngokuqhelekileyo wonke umntu uthi ukushiya abantwana kubayeni kuyingozi kakhulu - andiyikholelwa kule ngcamango. Ngokuqinisekileyo, kukho abantu abangakhathaliyo nabasasazekayo, kungcono ukuba bangahlali nabantwana abancinci, kodwa ukuba uyazi ukuba umyeni wakho ngumntu onoxanduva lokungamkeli amehlo kumntwana, kutheni ungayisebenzisi? Bashiye bodwa kwiiyure ezimbalwa uze kunye nabahlobo bakho kwi-cafe okanye nje ukuthenga. Kwakhona iholide!
Ngesizathu esithile, wonke umntu ukholelwa ukuba ngokuzalwa komntwana, umama osemncinci kufuneka aphenduke kwi-robot ye-nanny, ongenomdla kunoma yini enye ngaphandle kwe-diapers kunye ne-raspashonok. Ewe, ukuba sithetha ngokubaluleka kokuqala, ke impilo kunye nentuthuzelo yomntwana ukususela ngoku kuya kuba seyokuqala, kodwa oku akuthethi ukuba ufanele ukulibala ngokupheleleyo. Ukukhathala kunendawo yokuhlala kunye nokuthululela abanye. Okokuqala, umntu osondele kuwe-oko kukuthi, kumyeni wakho-ngokuqhelekileyo ufika kuwe. Kwaye, njengoko uyaziqonda, oku akuqinisekisi umtshato wakho ubuncinci. Ngako oko, kufuneka ufune iindlela zokuphumla kwaye uphonsa ngaphandle kobuhlungu ngaphakathi.
Ukuba unamantombazana nabantwana abancinci - ngokugqwesileyo! Xa abantwana bekhula kancinci, unokwenza iintlanganiso ezintle! Nangona iimvumba ziza kufundisana ngokunyanisekileyo, wena, imimmies, unokuthetha ngokukhululekile kwaye uphumule! Kuya kubakho kuphela ukuqinisekisa ukuba abantwana abacaphulelane, kuba besemncinci ababaqondi kakuhle ukuba kufuneka badibana njani, yintoni imidlalo edibeneyo abangayifumana nayo.
Ngokuqinisekileyo kwidolophu yakho kukho amaziko amakhulu ezonwabisa kwiintsana. Le ipaki encinane yokuzonwabisa yabantwana abancinci, apho kukho indawo nabazali babo. Ngelixa abantwana baya kukhwela ngamabhola kunye nemidlalo, bayakwazi ukusela ikhofi kunye nekhekhe, baqhelane namanye amama, zibonise, ekupheleni.
Ewe, ukuba imozulu yimozulu efudumele kakhulu, kutheni ungalungiselelanga iqela kwinkampani yabanye oomama abanezingane ezincinci? Thatha iintente ezimbalwa zeentsana, ukutya okuncinci kubo kunye nezingane, amathoyizi. Kubalulekile - ukhilimu ovela kummiyane oza kukhawuleza ukuba angahambi ekhaya avule aze avuke. Unako ukuthaba uyihlo uze uhambe nge inyama uze wenze i-shish-kebab enkulu!
Njengoko ubona, zininzi iindlela zokuphumla kwaye ufumane ulwandle lweemvakalelo ezintle, nokuba unomntwana omncinci. Ekuzaleni kweemvumba, ubomi abuyinto engapheliyo - iqala nje, ufuna nje ukufumana ixesha kunye namandla ukuzahlukana. Ukuzonwabisa-luyingxenye ebalulekileyo ebomini bethu, kungakhathaliseki ukuba ziphi iimeko zokuphila, kufuneka uqonde ukuba intlangano yakhe kufuneka ijongane nawe.
Ngenxa yoko, akukho zimo xa umntwana engakwazi ukusinda naphi na (nangona, mhlawumbi, ukuba ngaba wena okanye umntwana uyagula kakhulu kwaye ubophelelwe ngokuqinisekileyo endlwini - ngoko ke, izinto ziyakutshintsha, kodwa apha unokufumana indlela yokuphuma, kufuneka udibane nodokotela ). Ngokuqhelekileyo siqwalasela ubuvila kunye nenyaniso yokuba umama omncinci uyazilungisa - athi, Ndinomntwana omncinci ekhaya, andinalo ixesha, mna ubomi buhamba phantsi kwethambeka, ulutsha ludlulayo. Ubomi bethu, kunye nolutsha lwethu, lusisesandleni sethu. Ngoko thabatha kwaye uyiphathe.
I-yoga ye-Baby ukusuka ekuzalweni ukuya kwiiveki ezisibhozo: ukuqeqeshwa kokuqala kunye nokusila
Inyaniso kunye neengcamango malunga nokuncelisa
Indlela yokuphucula umgangatho wobisi lwebele kubomongikazi
Ukunyamekelwa kwabantwana ngenyanga yokuqala. Oko umntwana kufuneka akwazi ukukwenza
Kutheni abantwana abancinci bekhala?
Iingxaki zokuqonda ngokusemsebenzini emsebenzini
Okroshka nge sausage
I-spaghetti eneetamatato kunye neminquma kwioli yomnqumo
I-calendula: ukulungiswa kwebhodi yeentyatyambo kunye nodokotela wasekhaya
Indlela yokugqoka abakhulelweyo ebusika
I-Soup Soup Recipe
I-pie ne-salmon e-pinki